Soosaaraha Nooca Korantada Weelka Shiinaha iyo Soo-saare | Xinneng
Dhammaan taxanaha qalabka koronto-dhaliyaha aan dhawaaqa lahayn ayaa laga qaadi karaa qabatooyinka indhaha kor u qaada
Shaqada rinjiyeynta ee ka wanaagsan, rinjiga adag ee ku habboon dhammaan xaaladaha cimilada oo ka ilaaliya daxalka muddo dheer
Qaab dhismeed is haysta iyo xoog badan, qafis lagu dhisay heer sawaxan hoose Ma jiro naqshad qaadashada hawo qaadashada hoose; iska ilaali busta iyo wasakhda kale ee neefsashada.
Ballaadhiyey aagga hawo-qaadashada iyo soo-saarista
Sanduuqa fiilada wax soo saar ee kala go'an, u fududaanta isku xirnaanta fiilooyinka Ku habboon xaaladda cimilada oo dhan
Weelka waxaa lagu damaanad qaadayaa inuu haysto ugu yaraan 30% hoos u dhigista heerka buuqa marka la barbardhigo koronto-dhaliye nooca furan ee FULL load.
Shiinaha 0 # naaftada khafiifka ah ama ka sareysa ayaa lagula talinayaa in ay dareemaan sutech leh kala sooca biyaha saliidda si loo hubiyo shidaalka daahirka ah.
Soo jeedi in la qaato API CF ama saliid ka sareysa, heerkulka / nafwaayaha 15W-40
Nooca koronto-dhaliye ee naaftada ku jira ayaa leh nooca caadiga ah iyo nooca aamusnaanta
Naqshadeysan loona soo saaray si waafaqsan weelasha caadiga ah ee caalamiga ah, 20 fuudh oo ka hooseeya 1000KVA iyo 40 fuudh oo ka sarreeya 1250KVA; Iyadoo la raacayo shahaadada CSC ee u hogaansanaanta Shirka Caalamiga ah ee Badbaadada Kunteenarada, cutubka oo dhan waxaa si toos ah loogu isticmaali karaa weel caadi ah oo dhinaca badda ah, kaas oo si weyn u badbaadiya kharashaadka gaadiidka; Waxaa ku jira laba konteenar oo ah kuwa aan qarxin karin. Waxaa jira laambad aan caddayn qarxa shaashadda nalka / kontoroolka, kaas oo ku habboon dadka isticmaala inay shaqeeyaan oo ay dayactiraan; weelka waxaa laga furi karaa xagga hore iyo xagga dambe, waxaana jira albaabbo dhinac ah oo labada dhinac ee sanduuqa ah, kuwaas oo ku habboon isticmaalayaasha inay dayactiraan oo dib u habeyn ku sameeyaan. Waxaa jira sallaan ka baxsan sanduuqa; dhammaan fallaadhihii, qufulkii iyo handarraabbadeedii ayaa la rakibay Araaj biraha ayaa la isticmaalaa, aaladaha ka hortagga hirarka iyo biyaha roobka waxaa lagu dhejiyaa weelka;
Gudiga koontaroolka iyo golaha wax soo saarka waxsoosaarka ayaa kuyaala isla qeybta weelka, taas oo kufiican howlgalka maalinlaha ah ee isticmaalaha iyo isku xirnaanta fiilada wax soo saarka;
Qaab dhismeedka caadiga ah waxaa lagu qalabeeyaa nidaamka PMG magnet excitation, kaas oo hagaajiya awoodda bilowga ee matoorka isla markaana leh difaac ka leexashada leexashada; Haamaha shidaalka iyo dhuumaha, dheecaanka saliida, muufada, iwm waxay leeyihiin naqshado badan oo u gaar ah, kuwaas oo ay ka helaan dadka isticmaala;
Ma jiraan oo keliya waxqabadka sare ee gabowga u adkeysiga u adkaysta ololaha-celiska qalabka maareynta dhawaaqa iyo walxaha nuugaya dhawaaqa gudaha golaha nooca aamusnaanta ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay naqshad aad u fiican oo loogu talagalay qaadashada hawada iyo yareynta buuqa qiiqa;
1. Saar cudbi nuugaya iyo sabuurad daloolin bir ah hareeraha weelka oo ubaxow;
2. Saar saxanka aluminiumka ah ee aan siibiqsanayn sagxadda sanduuqa gudihiisa;
3. Saamaynta dhimista dhawaaqa waa 70-80dBA (LP7m);
4. Sanduuqa waxaa lagu qalabeeyay qolka xakamaynta, nidaamka bixinta saliidda, nidaamka nalalka, iyo booska dayactirka;
Hore: Chiller biyo ah
Xiga: Cummins Generator Taxanaha